Vavolombelon’i Jehovah any Afrika
Sierra Leone: Nampian’ny olona i Crystal
MPONINA 1 109 511 431
MPITORY 1 538 897
FAMPIANARANA BAIBOLY 4 089 110
Nivavaka izy mba hahita marenina
Anabavy misionera any Sierra Leone i Crystal, ary ao amin’ny fiangonana mampiasa tenin’ny tanana. Nivavaka izy talohan’ny handehanany hanompo mba hahita marenina ao amin’ny faritany. Nanao fiverenana mitsidika izy tamin’io maraina io, dia lalana hafa no nandehanany fa tsy ilay nahazatra azy. Nanonta ny olona izy raha mahafantatra marenina ry zareo, dia nisy nitondra azy tany amin’ny ankizivavy iray sariaka be. Nandray tsara ilay ankizivavy ary nilaza fa mazoto hivory. Nanontany an’i Crystal avy eo ny olona raha mbola mitady marenina izy. Nahita marenina hafa te hahalala ny fahamarinana àry i Crystal. Efa imbetsaka izy no nitory tao amin’io faritany io, fa izay vao nahita an’ireo marenina roa ireo. Mino izy hoe i Jehovah no nanampy azy.
“Tena natao ho an’ahy ilay lahateny!”
Handeha hivory i Emmanuel any Liberia, indray mandeha. Faran’ny herinandro tamin’izay, ary nitondra fiara izy. Nahita ankizilahy teo amoron’ny arabe izy. Niakanjo tsara be ilay ankizilahy, saingy hoatran’ny kivy be. Nalahelo azy i Emmanuel, dia nijanona sao misy azony anampiana azy. Moses no anarany. Nisy nangalatra daholo, hono, ny volany ny alin’io, dia handeha hamono tena izy. Nihaino tsara azy i Emmanuel, dia avy eo nanambitamby azy hoe: “Andao mba hiaraka amiko ho any amin’ny Efitrano Fanjakana e!” Nanaiky i Moses. Nitomany izy rehefa avy naheno an’ilay lahateny ho an’ny besinimaro. Hoy izy: “Tena natao ho an’ahy ilay lahateny! Hafa mihitsy ny Vavolombelon’i Jehovah.” Nanaiky hianatra Baiboly izy, ary mivory foana hatramin’izao.
“Izaho tsy mpanompo sampy!”
Mipetraka any Guinée-Bissau i Aminata ary 15 taona izy. Nasain’ny mpampianatra nanao sarina zavatra fampiasa amin’ny karnavaly izy sy ny iray kilasy taminy, tamin’izy 13 taona. Sarina biby sy zavamaniry anefa no nataon’i Aminata, dia nasiany soratra hoe “Paradisa” teo amin’ilay izy. Nomen’ilay mpampianatra zero i Aminata rehefa voangona ireo sary. Tsy misy ifandraisany amin’ny karnavaly, hono, mantsy ny sary nataony. Nanontany azy àry i Aminata rehefa nirava hoe: “Iza moa no namorona ny karnavaly?”
“Ny mpanompo sampy”, hoy ilay mpampianatra.
Guinée-Bissau: Aminata, manao sarina “Paradisa”
Dia namaly i Aminata hoe: “Fa izaho tsy mpanompo sampy, dia izay no tsy anaovako zavatra mifandray amin’ny karnavaly. Mino aho hoe efa hovan’Andriamanitra ho paradisa izao ny tany, dia izay no nataoko sary.” Nilaza àry ilay mpampianatra hoe hampanaoviny fanadinana an-tsoratra i Aminata hatao solon’ilay sary. Nahazo 18/20 izy tamin’izay.
Be dia be no tonga
Misy mpitory fito ao amin’ny antoko-mpitory any amin’ny tanàna kely iray any Malawi. Trano tsotsotra vita amin’ny hazo sy bozaka ary tsihy no ivorian’izy ireo. Vao avy nitsidika an-dry zareo ny mpiandraikitra ny faritra, dia nafana fo be ry zareo nanasa ny olona hamonjy ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Kristy. Jiro solitany maromaro nahantona no nampiasaina nandritra ny Fahatsiarovana. Feno be ilay toerana satria be dia be ny olona liana tonga tamin’ilay izy. Faly ireo mpitory 7 fa nisy 120 ny mpanatrika!
Malawi: Nisy 120 ny mpanatrika
Nanampy azy hamaha olana tao an-tokantranony ilay bokikely
Misy vokany tsara matetika ny fitoriana eny amin’ny toerana be olona, na dia tsy hita avy hatrany aza izany. Nanatona teo amin’ny fampirantiana ny vehivavy iray tany Lomé, renivohitr’i Togo, sady menamenatra ihany. Naka an’ilay bokikely hoe Tianao ho Sambatra ve ny Fianakavianao? izy. Niresaka momba ny Efesianina 5:3 taminy avy eo ireo mpitory, dia nifanome nomeraon-telefaonina ry zareo. Niantso ilay vehivavy afaka tapa-bolana, dia hoy izy: “Tsy tia Vavolombelon’i Jehovah mihitsy aho, fa novakiko ihany ilay bokikely. Tsara be ilay izy! Nanampy ahy hamaha olana sasany tao an-tokantranoko ilay izy, dia afaka nanampy mpivady roa hafa koa aho. Diso ny fiheverako anareo. Tongava fa vonona hianatra Baiboly aho.” Lasa nianatra Baiboly izy sy ny iray tamin’ireo mpivady nampiany.
Nadikany ilay bokikely
Tanàna kely any Ghana i Ankasie, ary misy mpivarotra vitsivitsy eny amoron’ny arabe. Manao fampirantiana ny mpitory any isaky ny alatsinainy. Nisy lehilahy atao hoe Enoch tonga teo, dia nitory taminy i Samuel. Nandray an’ilay bokikely hoe Mihainoa An’Andriamanitra i Enoch avy eo, dia nanontany raha misy boky amin’ny teny kusaal.
Ghana: Nadikany tamin’ny teny kusaal ilay bokikely
Hoy i Samuel: “Miala tsiny fa tsy manana izahay. Amin’ny teny frafra no anananay.” Mitovitovy amin’ny teny kusaal ny teny frafra. Rehefa hody tany amin’ny faritra avaratr’i Ghana i Enoch, dia nangataka boky hozarainy amin’ny havany.
Nitondra antontan-taratasy ho an’i Samuel izy rehefa niverina tany Ankasie. Voadikany tamin’ny teny kusaal ilay bokikely Mihainoa An’Andriamanitra. Mivory foana izy ary mbola mianatra Baiboly foana koa.